Date My Pet » Top 5 US Cities ny Tokan-tena Men
Top 5 US Cities ny Tokan-tena Men
Misy ny sasany tanàna Amerikana izay lehilahy tokan-tena mahazo aina kokoa noho ny hafa. Ny fifanakalozan-kevitra dia mikasika ny dimy anarana teo ambony ny lisitry ny tanàna toy izany. Izany, raha toa ianao ka lehilahy tokan-tena sy mitady ny hifindra, soraty-up izany dia azo antoka fa mahasoa ho Vakio ny ho anareo; ary raha efa amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo, Diniho ny tenanao tsara vintana.
1. New York City: Io vohitra io dia tsy ny firenena lehibe indrindra tanàn-dehibe, fa koa ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra eran-tany. Ny tanàna mananika ny lisitry ny tsara indrindra io tanàna Amerikana ho an'ny lehilahy tokan-tena voalohany indrindra noho ny tahan'ny tsy manambady lehilahy sy ny vehivavy ao aminy. Ho an'ny rehetra 100 tsy manam-bady ny olona, ny tanàna 125 vehivavy tsy manambady; izany, tokan-tena ny olona any New York City maro foana ny safidy azo isafidianana raha ny maka mpiara-miasa.
Matetika voafaritra ho toy ny “ny tanàna izay tsy matory”, New York City trano ampy safidy azo isafidianana na raha ny fiarahana toerana. Afaka fandraisam-bahiny ao amin'ny Central Park, na afaka misafidy ny handany ny glamorous hariva tao amin'ny fikambanana posh (ny tanàna vitsivitsy ireo).
2. Bismarck: Tokan-tena ny olona mitady ny hanorim-ponenana any ny misaintsaina ny namindra toerana an'ireo ho Bismarck, ny renivohitry ny fanjakan'i Dakota Avaratra. Amin'izao fotoana izao na dia leon'ny olana lehibe tany Amerika sy ny tahan'ny tsy fananana asa ankapobeny miafina manodidina 5.6 %, ny tahan'ny tsy fananana asa eto amin'ity tanàna ity ihany 2.8%.
Ankoatry ny, fa mihantona avy sy ny manokana fotoana hiarahana amin'ny vehivavy, ny tanàna dia manana toerana maro mafana, izay ahitana Pubs, alina kibay sy ny trano fisakafoanana. Bismarck dia mamela ny fiarahana amin'ny rano; azonao atao ny mampiaraka mpiara-miombon'antoka ho an'ny mitaingina sambo amin'ny Dam McDowell Nature Park.
Ireo lehilahy izay tia biking, etsy ankilany, afaka handray anjara amin'ny lalan biking nanaraka ny moron 'ny Renirano Missouri.
3. Washington D.C.: Raha toa ianao ka lehilahy tokan-tena fatra-paniry laza, renivohitry ny Etazonia no toerana misy anao ny. Ny tanàna maro Trano manan-tantara sy ara-kolontsaina, ary manintona dia toerana iray izay ny vehivavy tokan-tena tokan-tena betsaka kokoa noho ny lehilahy.
Rehefa ao Washington D.C., dia hahazo plethora ny safidy na dia mitady toerana daty. Afaka maka ny mpiara-miasa ho sambo mitaingina ny Tidala Basin, dia afaka mitsidika ny National Zoo, na mandany ny Cozy hariva tao amin'ny boîte de nuit Jazz manan-tantara The Bohemian zohy. Ireo dia vitsivitsy monja safidy anananao; hahita be kokoa indray mandeha ianao ao an-tanàna.
4. Philadelphia: Ny antso manan-tantara ity tanàna ity no mahatonga izany ny fahefatra entrant lisitra ity. Ny lehilahy tokan-tena tsara ny vehivavy tokan-tena lafin-javatra iray hafa tahan'ny dia tompon'andraikitra amin'ny fanaovana Philadelphia iray amin'ireo ambony 5 tanàna ho an'ny lehilahy tsy manambady.
Miaraka ao Philadelphia dia zavatra lehibe tsy noho ny toerana toy ny Fairmount Park, Philadelphia Museum of Art, Ortlieb ny Jazzhaus sy ny sisa, ny toetrandro ao an-tanàna ihany koa ny tompon'andraikitra amin'ny manao azy ho ny paradisa dater. Andro rehetra dia talaky masoandro andro any Philadelphia.
5. Miami: Ny Masiaka Nightlife ny mahatonga izany tanàna lehibe ponenana ho an'ny lehilahy tsy manambady. Ny vidim-piainana ambany dia ambany sy ny fanatrehan'i kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy tsy manambady dia anton-javatra lehibe roa hafa izay efa nanao Miami ny farany entrant lisitra ity.
Tsirairay ireo tanàna dimy dia hamela ny olona tokan-tena ny hanana fiainana mitranga. Izany, fa tanteraka miakatra ho any aminareo izay olona tianao ny hifindra amin'ny.